निकै जिद्दी र घमण्डी हुन्छन् यी अक्षरबाट नाम आउने युवक, तपाईको नाम कुनबाट ? – Khabaarpati
निकै जिद्दी र घमण्डी हुन्छन् यी अक्षरबाट नाम आउने युवक, तपाईको नाम कुनबाट ?
January 3, 2021 January 3, 2021 goodmamLeaveaComment on निकै जिद्दी र घमण्डी हुन्छन् यी अक्षरबाट नाम आउने युवक, तपाईको नाम कुनबाट ?
काठमाडौँ । आफ्नो सन्तानको विवाह हरेक आमाबाबुको सपना हुने गर्दछ। छोरी होओस् वा छोरी आमाबाबुको एउटै चाहना हुन्छ, बुहारी वा ज्वाइ राम्रो होओस्।
आज हामी केही यस्ता नामका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन नाम भएका व्यक्तिलाई कहिलै पनि ज्वाई बनाउने प्रयास नगर्नुहोस्। आउनुहोस् यी व्यक्तिको स्वभावका बारेमा जानौँःनिकै जिद्दी र घमण्डी हुन्छन् यी अक्षरबाट नाम आउने युवक, तपाईको नाम कुनबाट ?
बि बाट नाम आउने युवकः जुन युवकको नाम बि बाट आउने गर्दछन् त्यस्ता युवक झुट बोल्ने तथा केही कुरा लुकाउने खाले हुन्छन्। कहिले काही सबैका अगाडि केही कुरा नखोज्ने भएकाले इमेज खराब पनि हुने गर्दछ। यस अक्षरबाट नाम आउने व्यक्ति आफ्नो काम पुरा गर्नका लागि कहिलेकाही हद पार गर्ने गर्दछन्।जे बाट नाम आउने युवकः जे बाट नाम आउने युवक धेरै घमण्डी हुने गर्दछन्। जो व्यक्तिका साथ पनि यी व्यक्ति जिद्दी हुने गर्दछन्। यी व्यक्ति त्यही काम गर्दछन्, जो आफूले चाहेको होओस्। हरेक समय यिनीहरुको झगडा ससुरालीसँग हुने गर्दछ। जसका कारण यिनीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिन सक्दछ।
एन बाट नाम आउने युवकः एन बाट नाम आउने युवक निकै रिसाहा हुने गर्दछन्। जब यिनीहरु आक्रोशमा आउने गर्दछन्, तब उनीहरु आफ्नो नियन्त्रण गुमाउने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा युवती पनि रिसाहा भएमा सजिलै यस्ता व्यक्तिसँग एडजस्ट गर्न सक्दछन्।
यु बाट नाम आउने युवकः यु बाट नाम आउने युवक दोस्रो व्यक्तिसँग राम्रोसँग घुलमिल हुन सक्दैनन्। यिनीहरुको बानी निकै खराब हुने गर्दछ, जसका कारण दोस्रो व्यक्तिलाई समस्यामा पार्ने गर्दछन्।निकै जिद्दी र घमण्डी हुन्छन् यी अक्षरबाट नाम आउने युवक, तपाईको नाम कुनबाट ?
रंगको प्रयोगबाट चम्किने छ तपाईको भाग्य, कुन राशिलाई कुन रंग लक्की ?